Tombo-tenda - Fanazaran-tena fototra tokony ho fantatrao | Bezzia
Susana godoy | 14/09/2021 16:00 | fanatanjahan-tena
Androany mihoatra ny fanofanana fotsiny dia hoentin'ny andian-tantara maromaro isika fanazaran-tena na mihinjitra. Satria araka ny fantatsika tsara, io dia iray amin'ireo faritra sarotra indrindra, izay mety hijaly be. Ny fanaintainan'ny vozona na ny fanina mihitsy aza noho io antony io no filaharan'ny andro amin'ny fiainantsika.
Noho izany, raha eo am-pelatanantsika ny misoroka na manatsara azy ireo dia tsy misy tsara kokoa. Noho izany dia tsy maintsy tadidintsika fa misy izany andiam-panatanjahan-tena izay hahafahantsika miala sasatra kokoa amin'ny hatoka. Satria misy olana amin'ny vozon-tranonjaza mifandraika amin'ny fifanarahana. Hanomboka ve isika?
1 Mivelatra ny tendany
2 Mihodina ny loha
3 Mamelatra vozona ary manangona saoka
4 Mila mihinjitra koa ny hazondamosiko
Mivelatra ny tendany
Ity fanazaran-tena ity dia iray amin'ireo malaza indrindra ary ho fanampin'izany, dia afaka mahita azy amin'ny endrika isan-karazany ihany koa isika. Ny iray tamin'izy ireo dia ny ahafahantsika manao izany mipetraka, mamela ny sandry sy ny soroka koa. Raha manao hery kely amin'ny toerana roa isika dia tsara kokoa. Amin'izay fotoana izay dia tokony hikorisa ny hatokao amin'ny sisiny, toy ny hoe te hikasika ny soroka ny sofinao. Zava-dehibe ny tsy hanerena ny tenanao na oviana na oviana ary ny fanazaran-tena malefaka. Hanao izany amin'ny ankavanana ianao ary avy eo amin'ny ankavia na ny mifamadika amin'izany.
Mazava ho azy Ny variant hafa amin'ireny manenjana ny hatoka dia ny fanaovana azy amin'ny alàlan'ny tànana.. Raha tokony ajanona eo ambany ny sandry dia mitazona ny loha amin'ny tanantsika amin'ny sisiny izay te-hivelatra isika. Avy eo hijanona segondra vitsy toy izao isika hiova amin'ny lafiny hafa. Aza mampiasa tsindry be loatra amin'ny tananao koa fa manampy fotsiny.
Mihodina ny loha
Azontsika atao ihany koa ny manolo ny fanazaran-tena na manitatra ny hatoka etsy ambony miaraka amin'ity. Izy io no tsotra indrindra satria manana ny safidinao ianao ho afaka manao azy na ny mipetraka na ny mijoro. Amin'ireo tranga roa ireo dia mitovy ny toerana fanombohana satria mila manondrika ny sandry sy ny soroka koa isika. Vantany vao vonona, tonga ny fotoana hampihetsiketsika ny lohanao. Izany hoe, hihodina amin'ny lafiny iray isika ary avy eo amin'ny lafiny iray. Izany rehetra izany amin'ny fomba miadana hisorohana ny fanina tsy ilaina. Izy io dia fomba iray lavorary hampiasana ny hozatry ny faritra trapezius.
Mamelatra vozona ary manangona saoka
Ahoana no hahakely azy io, miatrika fanazaran-tena hafa mora indrindra hatao isika. Izy io dia ny mitazona ny vatana ho mahitsy, izany hoe ny ampahany amin'ny tratra tsy afaka mihetsika. Avy eo, ny hatoka sy ny saokany no hihetsika. SATRIA Hanao hetsika hatoka hatreo isika. Izahay dia mieritreritra fa manana vozon'akanjo vita amin'ny kodiarana ary te-hanenjana azy hatrany lavitra araka izay tratra, fa tsy hidina. Tandremo sao mihetsika ny sisa amin'ny vatana. Rehefa namelatra azy isika dia tonga ny fotoana hakana ity vozona ity ary hataontsika mihemotra mamela ny saokany hifikitra aminy tanteraka.
Mila mihinjitra koa ny hazondamosiko
Na dia mifantoka amin'ny ampahany amin'ny vozona aza isika dia marina fa miray hina ihany koa ny hazondamosina ary mila antsika handray izany. Betsaka ny fampihetseham-batana azontsika atao ho azy, fa amin'ity tranga ity dia ny ezahintsika dia ny fiarahan'ny hetsika ary natao ho an'ny tendantsika ihany koa. Noho izany, tsy maintsy mahitsy ianao. Raha atao teny hafa, toy ny hoe misy kofehy misarika ny lohanao ho any aminao. Amin'ity tranga ity dia mila isika ahinjiro ny lamosina sy ny hatoka fa tsy terena daholo, na dia arakaraka ny ahafahantsika manao tsara kokoa aza. Avy eo dia miala sasatra isika ary miverina amin'ny toerana fanombohana. Handeha mahitsy ny hatoka ary noho izany dia midina kely ny saokany toa te hanisy marika ny saokany roa ianao. Azonao ilay izy? Avy eo manaova famerimberenana maromaro dia ho hitanao ny fanovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » fanatanjahan-tena » Fanatanjahan-tena ary mihinjitra ho an'ny hatoka